Madaxweynaha Galmudug oo laga codsadey inuu soo gudbiyo liiska musharaxiinta. - Wardeeq 24 TV Madaxweynaha Galmudug oo laga codsadey inuu soo gudbiyo liiska musharaxiinta. Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Madaxweynaha Galmudug oo laga codsadey inuu soo gudbiyo liiska musharaxiinta.
Qoraal ay soo saareen Guddiga doorashada ayaa waxaa ay Madaxweyne Qoorqoor uga dalbadeen inuu soo gudbiyo Liiska Musharaxiinta u tartameysa kuraasta Xildhibaanada Aqalka Sare ee Baarlamaanka laga soo dooranayo Maamulkaas.
Sidoo kale Guddiga ayaa rajeeyay in Madaxweyne Qoorqoor uu ku kalsoonaan yahay Codsiga uga yimid Guddigooda doorashada, isla markaana uu soo saari doono Liiska Musharaxiinta.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug ayaan weli magacaabin Guddiga xubnaha Baarlamaanka ee qabashada doorashada Aqalka Sare, xili ay xusid mudan tahay in Baarlamaanka Galmudug uu fasax ku maqan yahay.
Hoos ka Akhriso Qoraalka ay Guddiga u direen Qoorqoor
Previous articleDawlada somaliland oo ka hadashey dilkii G.kuminshanka doorashooyinka Gobola Sool.
Next articleWararka laga helayo deegaanada Koonfur Galbeed ayaa sheegaya in maanta doorashada